nei mamaneja eQa asingadiwe muzvirongwa zvisingabviri
Kuru bash Nei maQA maneja Asingadiwe muAgile Projects
Muchinyorwa chino ini ndinotsanangura kuti chinyakare chinzvimbo che 'QA Manager' chinoshanduka sei uye chazove chisina basa uye nei vazhinji vachinzwa kutyisidzirwa nezveramangwana ravo basa seManeja weQA.
Basa uye mabasa eQA Mamaneja akachinja zvakanyanya mukati memakore mashoma apfuura, kunyanya nekuda kwemasangano mazhinji achienda kune agile nzira dzekuvandudza uko kune masumbu eAgile Teams ari kushanda pamwechete kuendesa zvinangwa zvebhizinesi.
Vazhinji mamaneja eQA vanowanzo sanzwa vachivhiringidzika nezve avo mabasa uye vanonzwa kusiri panzvimbo pavanoiswa mune isinganzwisisike mamiriro, kunyanya kana vanga vari mukutarisira maneja yekuyedza uye kutsanangura QA maitiro esangano.
QA Mamaneja muAgile Mapurojekiti
Pazasi pane zvimwe zvezvikonzero nei QA Maneja muchirongwa cheagile isingadiwe kubata vatengesi uye kuedza kwekuyedza.
Hapana Dhipatimendi Rokuyedza
Mukumisikidza kwakakodzera, hapana chinhu chakadai se 'Yekuedza Dhipatimendi', apo boka revanoedza rakagara pamwe chete, kazhinji kure nevakagadziri uye rinotarisirwa neTest Lead kana Test Manager.
Zvakare munzvimbo inonamira, pane kushomeka kushoma pane zvinyorwa zvinorema senge zvakadzama zvirongwa zvekuyedza iro rinowanzove iro basa reQA Manager kunyora magwaro aya munzira dzechinyakare.
MuScrum, inova inozivikanwa nzira yekusimudzira nzira, pane matatu makuru mabasa.
Timu yeScrum inozvibata-yega uye inoumbwa nevakagadziri, vagadziri uye testers. Chikwata cheScrum pachacho chine basa rekuendesa software yemhando yepamusoro.
Kwakave nemazuva apo maneja weQA akazozvidavirira paive nechikanganiso chakaburitswa mukugadzirwa. MuAgile, munhu wese anozvidavirira uye mhando ibasa remunhu wese.
Kana chiitiko chekugadzira chasangana, munhu wese anoungana pamwechete kuti aone chakakanganisika uye kuti chingadzivirirwe sei mune ramangwana.
Iko hakuna nzvimbo yeManeja weQA muAgile nekuti inotwasanudza inobvisa timu mutoro weQA chinova chikonzero chakazara nei zvikwata zvakanaka zveScrum zvinounza mhando yepamusoro. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti QA uye nekudaro kuyedzwa, chikamu chechisikigo cheAgile nzira dzekuvandudza nzira.
Hapana Zuva-kune-Zuva manejimendi eVanoongorora
MuAgile, zvinokosheswa zvebhizinesi zvinoshanduka kazhinji uye iyo Scrum Chikwata inoda kugadzirisa zvinochinja zvinokosheswa. Zvinenge zvisingaite kuramba uine shanduko dzese kunyanya kana paine maScrum Matimu mazhinji musangano rakakura.
Sekutaura kunoita Stephen Janaway mubhuku rake reblog pa ' Kupera kweMugwagwa weVatariri Vebvunzo? '
Kuva Mutariri Wekuedza munzvimbo ine Agile kunogona kuzvipatsanura pane dzimwe nguva, kunyanya kana iro dhipatimendi rakakura, uye huwandu hwemapoka akaomarara hwakakura. Zvinoda kugona kuenzanisa yakawanda ruzivo, zvakakosha, uye mabasa, munzvimbo dzinoverengeka. Stakeholder manejimendi uye simba rinova kiyi. Context switching inouya seyakajairwa. Kazhinji hazvinakidzi zvakanyanya.
MuAgile zvikwata, vanogadzira vanokurudzirwa kuyedza yavo yavo kodhi uye kunyora zvakakwana uye zvinobudirira mayuniti mayunitsi kuti vaone kuti iyo nyowani kodhi haina zvikanganiso zviri pachena uye kuti vaziviswe nekukasika pachangoputswa chinhu.
DevOps Nheyo uye Pfungwa
Kana isu paine hwaro hwakasimba hweyuniti mayuniti bvunzo iyo yatinogona kuvimba nayo, inobvisa iwo mutoro wevanoedza kuve nekuyedza zvikanganiso zviri pachena; pachinzvimbo, ivo vanokwanisa kutarisa zvakanyanya pakuongorora kwekuongorora uye kubatsira neUAT iyo isingade kuronga kwakanyanya uye zvinyorwa.
QA Mamaneja Kuchinja kune Agile Nzira dzeKushanda
Nekudaro, QA Mamaneja Anogona sei kuchinjira kunzira dzinokurumidza dzekushanda uye kubatsira mumapurogiramu agile?
Kunyangwe iro rechinyakare basa uye mabasa eManeja weQA angangodaro asingaonekwe seanodiwa mune Agile mamiriro, kune dzimwe nzvimbo uko QA Mamaneja anogona kuwedzera kukosha.
Maneja weQA muAgile anofanirwa kuve muyedzo ane ruzivo kuti akwanise kupa rairo pamamiriro ezvinhu akaoma. Ivo vanofanirwa kuziva kuti kuyedza kunokwana sei muchirongwa chisina kugadzikana.
Iwo mapoinzi akafukidzwa pane blog post Test Manager muAgile naKatrina Clokie (aka Katrina muTester) inopa pfupiso yakanaka yebasa idzva reManeja weQA muAgile:
Kufambisa kwekutaurirana-kwepakati-timu kune akawanda mapurojekiti akaomarara mukati mesangano
Kupa maonero akaunganidzwa ekuyedza kune epamusoro-chikamu manejimendi
Tsigiro yemunhu, kuraira, uye kusimudzira kwehunyanzvi kwevaedzo
Kuve nzvimbo yekukwira kune vanoedza
Kugadzira bhajeti kana kufungidzira kwekuyedzwa sevhisi inoenderana nehurongwa hwehurongwa
Dzimwe nzvimbo uko QA Mamaneja muAgile anogona kuwedzera kukosha ndeaya:
Iva mutsigiri weQA musangano rese
Kuchengetwa kweQAs uye Automation Engineers
Kupa hunyanzvi hwehunyanzvi, i.e. kushandiswa kwakakodzera kwemaitiro ekuyedza muzviitiko zvakakodzera
Kuvimbisa zvikwata (Scrum Teams) kuita uye kutevedzera maitiro akanakisa ekudzivirira zvikanganiso
Kupfupisa, basa reManeja weQA muAgile rinowedzera kutsigira, kudzidzisa, kufambisa uye kubvunza mamwe maQAs nedzimwe nhengo dzechikwata uye kuona kuti QA maitiro akanakisa akagadzwa uye hunhu hwacho hunobikwa kubva pakutanga.
Heano maitiro ekuita yako Android nekukurumidza nesarudzo dzekuvandudza
Iyo isingadhuri Samsung Galaxy Tab S6 Lite iri pakupedzisira kukwira kutengeswa muUS